Vagadziri vePurasitiki & Vatengesi - China Chipurasitiki Fekitori
Yakajeka Lid Inoraswa Plastiki Sushi Bhokisi
Kunyangwe iwe uri kuronga kuchinja iyo inogona kuraswa epurasitiki sushi bhokisi, kana iwe uchida izvo zvakanaka zvigadzirwa pamutengo wehupfumi, tenga zvigadzirwa zvemagetsi online kubva kuChunkai's Team. Zvigadzirwa zvedu zvinowanzodiwa pakati pevatengi nekuda kwezvinhu zvavo sekuvaka kwakasimba, anti-fog, ngura kuramba uye hupenyu hwakareba hwebasa. Nerubatsiro rwevashandi vedu, isu tinopa izvi zvigadzirwa mumhando dzakasiyana siyana zvichienderana nezvinodiwa zvakasiyana zvevatengi vedu vakakosha. Uye zvakare, kambani yedu inoshanda mukugadzira nyanzvi sushi bhokisi, rinoraswa repurasitiki sushi bhokisi.
Plastiki Yakanaka Mist Sprayer ine Overcap
Akanaka mister anopfapfaidza zvinhu pamusoro penzvimbo hombe. Kusiyana nekudurura zvigadzirwa, kana uchishandisa mister machipisi, zvinhu zvacho hazvinyorove kana kuzadza nzvimbo, asi pachinzvimbo, vanoisa nhete nhete yezvigadzirwa, inova iyo yekuwedzera yezvinhu zvakaita senge bvudzi pfapfaidzo nezvinonhuwira. Mari yakashandiswa inogona zvakare kugadziridzwa nekumwaya yakawanda. Kana zvasvika pakushandisa mhepo fresheners, gore remhute yakanaka rinopararira nyore sezvo richigara mumhepo kwenguva yakareba uye zvidimbu zviri kureruka. Nepo mamwe ekugezesa angave akakodzera zvirinani kushandisa zvinokonzeresa zvinokonzeresa, izvo zvinopa chigadzirwa pamusoro pemeso munzvimbo dzakaputika dzakapinza, machina ekuchenesa mawindo uye zvigadzirwa zvekuchenesa huni zvinowanzoita zvirinani kana zvichimwayiwa kubva kumamita akanaka.
Disposable Spoons Mapanga Fork Forogo Dzokucheka Tableware
Spoons Spoons Mapanga Fork Cutlery Tableware inoita kuti hupenyu huve nyore pamabhizinesi, ayo panzvimbo pekufanirwa kusuka mawanda esimbi maforogo, zvipunu, uye mapanga, anogona kungokumbira vanotema kuti varase zvidimbu zvavo kana vapedza kudya. Izvo zvakare zvinoita kuti hupenyu huve nyore kune vatengi vari kuitisa zviitiko kana mapato ane huwandu hwakawanda hwevaenzi.
Vacuum Kuchengetedza Mabhegi kune Space Saver
Mabhegi emuchina kana mabhegi ekudzvinyirira ave kufarirwa kwazvo mumakore mashoma apfuura sekuti vanhu vazhinji vakatanga kumanikidza mbatya nemicheka kuchengetedza nzvimbo.
Inoshanda nechero vacuum cleaner, ingoirongedza. Kuchengetedza nzvimbo yekuchengetera, 80% nzvimbo yakaderedzwa
Double chisimbiso zipi anochengeta airtight uye isapinda, munhu utility clip rakabatanidzwa ose bhegi
Hapana chakuvhe uye chakuvhe, chengetedza mbatya dzako, machira ekuwaridza, mapiro, magumbeze
350ml Mafuta U-chimiro Pet Plastiki Muto Bhodhoro
Izvi 350ml Mafuta U-chimiro Pet Plastic muto bhodhoro akanaka chaizvo, akakodzera muto, zvinwiwa uye water.It akashandisa chikafu giredhi PET zvinhu, BPA vakasununguka, vachiwirirana pamwe kuba umboo chivharo.Tinogona gadzirisa ruvara bhodhoro, zvakare chitaridzi kana anodhinda. logo pabhodhoro.
Transparent Plastiki PE Zipper Zvipfeko Mabhegi
Iyi Transparent Plastiki PE Zipper Clothes Bhegi rakagadzirwa nezvinhu zvitsva zve PE, kusimba kwakasimba, kutaridzika kutaridzika, nyore kunyora, kwakanaka uye nerupo, zvinogona kunyorerwa uye kudhindwa. chiratidzo yekuisa chisimbiso kumucheto.
Chubby Yakajeka Mukaka Tea PET Bhodhoro
Iyi Chubby Yakajeka Mukaka Tea PET Bhodhoro yakanaka kwazvo, inokodzera mukaka tii, zvinwiwa uye mvura.Yakashandisa chikafu giredhi PET zvinhu, BPA yemahara, inofananidzwa nebavha chiratidzo cap.Tinogona kugadzirisa ruvara rwebhodhoro, zvakare kunyora kana kudhinda logo pa bhodhoro.
Yakagadzirwa Conical Yakaumbwa Bhodhoro reKutora
Iyi Bhodhoro Rekushandura Rakaumbwa Bhodhoro reTakeaway rakanaka kwazvo, rakakodzera mvura yemaminerari, zvinwiwa uye mvura.Rakashandisa chikafu giredhi PET zvinhu, BPA yemahara, inowirirana nebavha chiratidzo cap.Tinogona kugadzirisa ruvara rwebhodhoro, zvakare kunyora kana kudhinda logo pa bhodhoro.
Dota-paza otomatiki Kuvhara Tambo Garbage Bhegi
Iyi Dot-break otomatiki yekuvhara tambo Garbage Bhegi inogadzirwa neiyo nyowani yeHDPE zvinhu, yakasimba kuomarara, kutaridzika kutaridzika, nyore kunyora, yakanaka uye inyore kushandisa.The Dot-bhatani Automatic Kuvhara Tambo Garbage Bhegi rinogona kubata rinorema marara neine dot break dhizaini.
Makamuri maviri epurasitiki Chikafu Mudziyo
Ichi Chipenga Chechipiri Chemidziyo Chikafu chakakurumbira uye chinotengesa kutengesa,
Iine pazasi zvakwakanakira:
Chengetedza Chikafu Chitsva: Kudya Kwakakura Kugadzirira Kwekudya Bhokisi kuti uchengete chikafu chako chitsva uye kudya preps nyore.
Kuchengetedza: Iyo mudziyo uye muvharo zvinoitwa neBPA-Mahara uye Chikafu-Giredhi Yakachengeteka PP zvinhu.
Reusable uye Durable: Iyo mudziyo yakagadzirirwa kuti isungike mufiriji kana bhegi remasikati, iine irikubuda-proof uye nemhepo yakavharika chivharo.
Microwave / Freezer / Dishwasher Yakachengeteka PaPamusoro Rack: Kutsungirira tembiricha kubva -40 ° F kusvika 320 ° F (Kana -40 ° C kusvika 160 ° C)
Vacuum Sealer Mabhegi eKudya Saver
Iyi Vacuum Sealer Mabhegi eKudya Saver inozivikanwa kwazvo uye inopisa kupisa.
Chengetedzo: BPA Yemahara, Simira uye Microwave Yakachengeteka, Yakakura yeSous Vide Kubika
Imwe Yevose: Yakagadzirirwa kushandiswa neese michina yekupakata michina
Heavy Duty: Yekutengesa giredhi yakawanda-ply zvinhu block oxygen uye hunyoro uye inobvisa giya kupisa kupisa uye kupera mvura
Zvehupfumi: 2 mapakeji 11 `` upamhi, makumi mashanu emamita kureba. rinova zana tsoka dzese. Kugadzira yako yakareba bhegi.
Disposable Takeaway Plastic Kuchengeta Chikafu Mudziyo
Ichi Chinoraswa Kutorwa KwePurasitiki Kuchengeterwa Chikafu Chine Container chakakurumbira uye chinopisa kutengesa. Sarudzo yakanaka kwazvo kana iwe uchida kuti vatengi vaone chigadzirwa chako pasherufu, blister mapaketi anogona nyore kugadziriswa neakawanda maficha uye sarudzo dhizaini kuzadzisa izvo chaizvo zvinodiwa zvechigadzirwa chako. Blister kurongedza zvakare inoita rakakura basa kuchengetedza zvigadzirwa zvako zvakachengeteka nepo zvichiita kuti kuwana kuve nyore kune mutengi. Funga zvinotevera zvakanakira blister kurongedza.